Nyere Anyị na na Unashamed Africa — njem Lee - Official Site
Ekele tupu ekpere unu fam. Anyị mkpa ha
David kamau • August 19, 2013 na 7:36 Abụ • zaghachi
cant echere yall kụrụ Kenya na fraịdee woooohooo!! prayn gị doro anya na.
Eleanor Rigby • August 19, 2013 na 7:36 Abụ • zaghachi
Oo chimoo!! i ga-n'anya-esi jide unu!! im dị malite ịme gị music n'ime usoro ihe omume na Na Umthombo, Durban. Ha bụ n'okporo ámá na na, ma ha bụ ndị dị nnọọ ka nkịtị ụmụaka na a furu efu olileanya. Ha mkpa ha n'ike mmụọ nsọ, ha mkpa ha ụfọdụ nlereanya. Na ha bụ otú omiiko banyere music, a niile bụ ha hụrụ n'anya na-eme, egwú na-abụ abụ na-ege ntị music, nevermind ndị ọzọ niile ihe ha ga-esi ruo, na Umthombo enyemaka. Okwu a bụ okwu MTV yiri ka nanị ihe na-abụ, hiphop na ha na-gụrụ, M ga-n'ezie hụrụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ndị a na ụmụ nwere ike ịnụ ihe ị na-ebi!!!
kpaliri m ma ọ bụrụ na i nwere oge ụfọdụ na gị oge!!
M nnọọ ike kwere unu nọ SA na m naanị hụrụ nke a ugbu a!
Chineke dị mma!!
Lesco101 • August 19, 2013 na 7:36 Abụ • zaghachi
i hv hụrụ wat u ụmụ okorobịa na-eme,Obi abụọ adịghị ị Kraịst,Chineke ga-multiple n dịkwuo u.u ahapụ ka ịmara ya na-eme ka ya mara
Maureenwabs • August 19, 2013 na 7:37 Abụ • zaghachi
u n'ezie n'eluigwe ala Nairobi…metụrụ m n'ahụ n'ụzọ na ị na ụmụ okorobịa bụghị nanị na-abụ abụ banyere xtianity biotek ị na-ebi ndụ it.i-ekpe ekpere maka Gods ngọzi n amara Ua ụzọ.
Agnes • August 19, 2013 na 7:37 Abụ • zaghachi
Bụ na egwu na Wednesday na Gaborone Botswana. Chaị ihe a oké arụmọrụ site na ị na-niile. Ị n'ike mmụọ anyị a ukwuu. ABỤ M unashamed. Na-atụ anya na-enwe gị ụmụ okorobịa azụ ebe a. Chineke na-agọzi gị na na na na ihe ndị ọzọ na-Unashamed Africa tour. Ga-ekpe ekpere ka unu.
Lchinjala • August 19, 2013 na 7:37 Abụ • zaghachi
ga m atụ uche Malawi GOSI AM IN CHINA…… Ụmụ okorobịa CHINA mkpa Chineke kwa…..
JMG • August 19, 2013 na 7:38 Abụ • zaghachi
dope!!! Amazing Clip, Otuto diri Chineke!! P.S. Ebe bụ pro na a arụmọrụ?
Netan"JabbaBoy" ahuhu • August 19, 2013 na 7:38 Abụ • zaghachi
eche yall na Johannesburg… Im n'aka ị chọpụtara Tshirt sadying “IMPRAYINGFORYOU”
Svetlana • August 19, 2013 na 7:38 Abụ • zaghachi
Kpere ekpere maka unu na cant anwu ịnụ otú ọ gara!!!!! -Mma na ga na-ị na m na-ekpe ekpere!!! Njem Lee mgbe ị na-comming azụ Charlotte ọzọ uche ị nza!!!!
Joe-seph • August 19, 2013 na 7:38 Abụ • zaghachi
Onyenwe anyị Jizọs na-ha ike na ike,-elekọta ezinụlọ ha mgbe ha na-anọghị,eji ha na-ekele gị Holy aha,ka concerts gaziere ma jupụta na ọnụnọ gị na ka aha gị ga-adị elu n'elu everything.Amen
Roxanne • August 19, 2013 na 7:39 Abụ • zaghachi
Kasị maa ga-! Hụ na ị na Cape Town ụkwụ anụ nke bụ egwu :)
Liam • August 19, 2013 na 7:39 Abụ • zaghachi
Ekpere m ekpere na-atụ aro na-ekpe ekpere. Ọ bụ ezie na ọ bụ a dị mfe ekpere, M maara Ọ nụrụ m!
Ka Jesus gọzie, nkasi obi na-enye gị ike Ya, ike na nghọta.
Kenya Seven • August 19, 2013 na 7:39 Abụ • zaghachi
na-ekpe ekpere! kasị Maa!
Tylerbrabham • August 19, 2013 na 7:40 Abụ • zaghachi
Kpere ekpere maka unu. Chukwu gozie.
lilcj • August 19, 2013 na 7:40 Abụ • zaghachi
e onyenwe adịwo mma nye m nke ukwuu, ma ugbu a m na dị nnọọ wanna-egosi m talent na ndị mmadụ ka ma onye Jizọs bụ
Rshidel • August 19, 2013 na 7:40 Abụ • zaghachi
Ekpere anaghị kwadebe unu ka ukwuu ọrụ.
Ekpere bụ ka ukwuu na-arụ ọrụ. —- Oswald Chambers
QuintonTodd • August 19, 2013 na 7:41 Abụ • zaghachi
Ị ụmụnna nwetara ekpere anyị!!
Star Carmona • August 19, 2013 na 7:41 Abụ • zaghachi
eme! M na-arịọ Jehova na-ị na-ọma, na ya ezi amara!!!
Rebecca • August 19, 2013 na 7:41 Abụ • zaghachi
N'ihi nke ukwuu maka-etinye a.
M na-achọ ka ha mara otú m nwere ike na-ekpe ekpere maka yall.